ဘယ်ေ လာက် စား စား ဝမလာ ရ တဲ့ သူ မ ရဲ့ လျှို့ ဝှက် ချက် ကို အေးမြတ်သူ ပြော ပ လိုက် ပြီ – The News Post
“မမြတ်လေး ….. အများကြီးေ တွစားပြီး …………မဝတာ ….ဘာကြောင့် လဲ????????အဖြေကတော့……အမျိုးသား…/အမျိုးသမီး…တိုင်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားတစ်ခုခုတော့ လုပ် ရ‌‌တော့ မယ့်…..ခေတ်ကာလအနေအထားကြီးဖြစ်နေပြီ ……ချစ်ရသူ တို့ရေ……နေထိုင် မှုပုံစံအသစ် မှာ…အာဟာရရှိတာတွေ စားသောက်ပြီး…. ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိ ဖို့လိုအပ်နေပြီရှင့်…….အားလုံး…အားလုံး … နေကောင်း ကျန်းမြာ က မှာပါ။
ပရိသတ်ကြီးရေ.. မမြတ်လေး လို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောအေးမြတ်သူကတော့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ပွင့် လင်းတဲ့ဟန်ပန် အပြောအဆိုလေးတွေနဲ့ ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့ နေထိုင်ပုံလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုရတဲ့သူလေးပါ။ ဒါ့ပြင် သူမရဲ့ ကျော့ရှင်းလှတဲ့အ လှတရားလေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပါးချိုင့်လေးဟာလည်း ပရိသတ်ရင်ကိုထိမှန်စေတာ အသေအချာပါပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
အေးမြတ်သူဟာ အခုချိန်ထိလည်းအရွယ်တင် နုပျိုနေဆဲဖြစ်ပြီး သူမရဲ့အလှတရားတွေ ဟာဆိုရင်လည်း ဆယ်ကျော်သက်တွေ အရှုံးပေး ရလောက်အောင်ကို လှပနေတာပါ။ အေးမြတ်သူဟာ အသက်(၃၀)ကျော်လို့ထင်ရက်စရာမရှိအောင်ကို ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းရော၊ အသားအ ရည်တွေပါ လှပနေတဲ့ မင်းသမီးချော တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ အေးမြတ်သူဟာ အမြဲအရွယ်တင်နုပျိုနေပြီး အများကြီး စားလည်းဝမလာရတဲ့ သူ မရဲ့လျှို့ဝှက်ချ က်ေ လးကို မျှေ ဝပေးလာပါတယ်။
Photo credit- Aye Myat Thu’s Facebook page
“မမွတျလေး ….. အမြားကွီးေ တှစားပွီး …………မဝတာ ….ဘာကွောငျ့ လဲ????????အဖွကေတော့……အမြိုးသား…/အမြိုးသမီး…တိုငျး ကိုယျလကျလှုပျရှား အားကစားတဈခုခုတော့ လုပျ ရ‌‌တော့ မယျ့…..ခတျေကာလအနအေထားကွီးဖွဈနပွေီ ……ခဈြရသူ တို့ရေ……နထေိုငျ မှုပုံစံအသဈ မှာ…အာဟာရရှိတာတှေ စားသောကျပွီး…. ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုရှိ ဖို့လိုအပျနပွေီရှငျ့…….အားလုံး…အားလုံး … နကေောငျး ကနျြးမွာ က မှာပါ။
ပရိသတျကွီးရေ.. မမွတျလေး လို့ အားလုံးက ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောအေးမွတျသူကတော့ ခဈြစရာကောငျးပွီး ပှငျ့ လငျးတဲ့ဟနျပနျ အပွောအဆိုလေးတှနေဲ့ ဟနျဆောငျမှုကငျးတဲ့ နထေိုငျပုံလေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှေ အခဈြပိုရတဲ့သူလေးပါ။ ဒါ့ပွငျ သူမရဲ့ ကြော့ရှငျးလှတဲ့အ လှတရားလေး နဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ပါးခြိုငျ့လေးဟာလညျး ပရိသတျရငျကိုထိမှနျစတော အသအေခြာပါပဲ ဖွဈ ပါ တယျ။
အေးမွတျသူဟာ အခုခြိနျထိလညျးအရှယျတငျ နုပြိုနဆေဲဖွဈပွီး သူမရဲ့အလှတရားတှေ ဟာဆိုရငျလညျး ဆယျကြျောသကျတှေ အရှုံးပေး ရလောကျအောငျကို လှပနတောပါ။ အေးမွတျသူဟာ အသကျ(၃၀)ကြျောလို့ထငျရကျစရာမရှိအောငျကို ခန်ဓာကိုယျပိုငျးရော၊ အသားအ ရညျတှပေါ လှပနတေဲ့ မငျးသမီးခြော တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ အခုအခါမှာတော့ အေးမွတျသူဟာ အမွဲအရှယျတငျနုပြိုနပွေီး အမြားကွီး စားလညျးဝမလာရတဲ့ သူ မရဲ့လြှို့ဝှကျခြ ကျေ လးကို မြှေ ဝပေးလာပါတယျ။
ဆရာ ကြီး မင်းသိင်္ခ ရဲ့ ခု နှစ် ရက်သားသမီးများအ တွက် (၂၀.၉.၂၀၂၀) မှ (၂၆.၉.၂၀၂၀) ရက်ေ န့အ ထိ တစ်ပ တ်စာဟော စာ တမ်းများ
အခက် အခဲ အကြပ် အတည်း အမျိုးမျိုးကို ( ၇ ) ရက် အ တွင်း လွတ်ြေ မာက်စေ နိုင် တဲ့ ဂါထာတော်